Umunyu koweStormers bedla isicoco se-URC
IDHL Stormers ibe ngompetha bokuqala bomqhudelwano we-rugby oboqala ukubakhona i-United Rugby Championship ohlanganise namaqembu ase-Europe Isithombe: BACKPAGEPIX
Xolile Mpisane | June 20, 2022
UTUSE abadlali bakhe ngokuzinikela umqeqeshi weDHL Stormers, uJohn Dobson, ngemuva kokudla iVodacom Bulls ngo-18-13 kowamanqamu we-United Rugby Championship (URC).
Leli qembu laseKapa, likhale lemuka nale ndebe ebidlalwa okokuqala kule sizini ngesikhathi livuka umbhejazane esiwombeni sesibili eCape Town Stadium, ngoMgqibelo ebusuku.
IStormers igudluze i-Edinburgh ne-Ulster ukuze ifinyelele kowamanqamu, iBulls yakhipha iCell C Sharks neqembu eliqede liqhwakele kwi-log ngemuva kwayamaqoqo, iLeinster.
IBulls ihambe phambili ngo-7-3 nge-try ka-Harold Vorster ne-conversion kaChris Smith, amaStormers esangene ngephenathi ekhahlelwe nguMannie Libbok.
Iqembu lasekhaya liwasebenzise kangcono amathuba alo esiwombeni sesibili lakwazi ukuthola ama-try amabili abekwe u-Evan Roos no-Andre-Hugo Venter. IBulls ayibange isakwazi ukweqa umugqa, yagcina ithole amaphenathi amabili ashaywe nguSmith.
UDobson, obecwebe izinyembezi ngemuva komdlalo, uthe akekho obelindele ukuthi iqembu lakhe lizogcina liyiphakamisile indebe kodwa uyaziqhenya ngokuzimisela kwabadlali.
“KwiRainbow Cup siphume isibili, sihlulwe yiBulls kabili emizuzwini engeziwe. KwiCurrie Cup silale isibili kodwa sadliwa yiSharks kowandulela owamanqamu. Ngokunjalo nakulo mqhudelwano bekushubile ngendlela eyisimanga,” kusho uDobson.
“Uma ngingakhetha okusenze saphumelela ngingabala ukuziphatha kahle nokuqina kwabadlali bethu. Sineqembu elihle impela futhi sibenze bakholelwa kulokho ebesizama ukukwenza.
“Besihlezi sisemaphepheni ngezizathu ezingalungile kanti nabalandeli bethu bebezizwa beqhelelene neqembu ngenxa yokungenzi kahle ngaphakathi nangaphandle kwenkundla.
“Njengoba kade sijikeleza inkundla manje abantu, bebesibonga futhi lokho kusinika amandla. Empeleni yithina okumele sibonge bona."
Kucacile ukuthi umqeqeshi weBulls, uJake White, ubengeneme ngezinye zezinqumo ezithathwe ngunompempe, u-Andrew Brace, kodwa ekugcineni uthe ngeke amsole ngoba indweba ubeyishaya ngendlela abona ngayo umdlalo.
“Bengingacabangi ukuthi sizowunqoba lo mdlalo. Ngicabanga ukuthi unompempe wenze kahle, ubone lokhu akubonile. Kukhona ezinye izinto ebezingaphezu kwamandla ethu. Nani nizibonele," kusho uWhite.
“Ngisaphinda ngithi unompempe udlalise kahle, ningangicaphuni kabi. Wenze okuhambisana nakubonile yena. Angisoze ngaqophisana nonompempe.
“Esiwombeni sokuqala, bangene engxenyeni yethu yenkundla, bathola iphenathi ye-offside. Singene engxenyeni yabo izikhawu ezicishe zibe yisithupha kodwa asitholanga neyodwa iphenathi ye-offside. Izinto ezinjalo esingakwazi ukuzilawula.
“Ngokwebhola lombhoxo, bekufanele sihambe phambili ngamaphuzu athe xaxa ngesikhathi sekhefu. Ngicabanga ukuthi sichithe isikhathi esiningi engxenyeni yabo kodwa sangawaqedela amathuba."
Bekungeyona impelasonto enhle kubalandeli beBulls njengoba iphinde yakhishwa kwiCarling Currie Cup, idliwa yiWindhoek Lager Griquas ngo-30-19 kowandulela owamanqamu obuseLoftus ngoLwesihlanu ebusuku.
IGriquas sizobhekana ne-Airlink Pumas kowamanqamu eKimberley ngoMgqibelo, ngo-5 ntambama.
IPumas ijikele iqembu ebelithwelwe ngeqoma, iToyota Cheetahs, yaliqumba phansi ngo-38-35 ngoMgqibelo ntambama.